Weelsitti duuti koolugalaa lammii Itiyoophiyaa qoratamaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Weelsitti duuti koolugalaa lammii Itiyoophiyaa qoratamaa jira
Magaalaa Siwaansii keessatti du'ee kan argame dargaggeessi Itoophiyaa kun, erga iyyanni koolugaltummaa isaa jalaa kuffifamee, dararamaafi deegummaaf saaxilamee akka ture hiriyoonni isaa ni dubbatu.
Umuriin isaa digdamman keessa kan jiru Iyyoob Tafarraa, Weels keessatti kan argamtu magaalaa Siwaansii jedhamtu keessatti koolugaltummaa gaafatee ture. Hiriyootni isaa yeroo dhumaaf sagalee isaa kan dhageenye wayita jala bultii waggaa haaraa Itoophiyaa kabajuuf wal agarredha jedhu.
Reeffi isaa guyyoota afuriin booda Siwaansii Maarinaa iddoo jedhamuutti bishaan keessaa argame. Hiriyootni isaa wiixataa darbe walitti qabamuun gadda isaanii ibsataniiru.
Akkaataan itti du'e ammaaf qoratamaa kan jiru yommuu ta'u, Poolisiin Kibba Weels haalonni ajjechaa ta'uu shakkisisan akka hin jirre ibseera.
Dhaabbata tola ooltummaa baqattoota gargaaru hundeessite gaggeessaa kan jirtu Reechal Maatiwos akka jettutti, ''du'a hiriyaa isaa Mohamuudiin booda, jireenyi Iyyoob jeeqamuu jalqabe.''
Mana itti jiraatuufi faayidaa adda addaa argatu waan dhabeef, Racheel mana maatii isheetti galchitee Iyyoob gargaaraa turte.
Akka BBCtti himtetti, of ajjeessuuf erga yaale booda deeggarsa fayyaa sammuu akka argatuuf mana yaalaa akka geesitullee yaalii argachuu akka dhorkame dubbatti. Sababni yaalii dhorkameef waan itti hin himamneefis aaree akka ture himteetti.
''Kutaa doktoraa keessaa baanee, karaarra wayita geenyu na ilaalee, 'Namuu na gargaaruu hin danda'u jechuudhaa?' naan jedhe'' jetti Reechal.
''Deebii tokkoyyuu hin qabun ture. Dhugumatti doktoroonni ni gargaaru jedhee abdadheen ture.''
Tajaajiloota fayyaafi deeggarsa hawaasaa qunnamuuf yaaltullee, kanaanis milkaa'uu dhabuushee BBCtti himtee jirti.
Goodayyaa suuraa Warri Iyyoob beekan walitti qabamuun gadda isaanii ibsataniiru.
Akka seera Mootummaa UKtti, namni iyyannoon koolugaltummaa isaa fudhatama hin arganne, guyyoota 21 keessatti biyyattii gadhiisee ba'uu qaba.
Haata'u malee, adeemsi kun guyyoota kanaa ol fudhachuu danda'a. kanaafis jecha, namni iyyannoon isaa jalaa kuffifame, kaardiin kaffaltii Paawundii 35 of keessaa qabu ni kennamaaf. Kanaanis, nyaataa fi huccuu turban tokkoof gahu argata jechuudha. Kana malees, dawoonis ni kennamaaf.
Haata'u malee, Iyyoob iddoo itti bulu waan hin qabnef, kaffaltii torbanii sanallee argachuu hin dandeenye.
Achuma magaalaa Siwaansii keessa kan jiraatu hiriyaan isaa Masfin jedhamu reeffa isaa biyyatti erguuf maallaqa walitti qabaa akka jiru BBCtti himeera.
Hiriyaan isaa biroo maqaan isaa akka himamu hin barbaanne, Iyyoob du'uu isaa haga ammaa amanuu hin dandeenye. "Namoota hedduutu koolugaltummaa dhabee karaaratti kufa, qorri biyya kanaa ammo halkan tokko nama hin bulchu," jechuun BBCtti hime.
''Dhaabbanni Fannoo Diimaa, bajata namoota rakkoolee akkanaa keessa jiran gargaaruf oolu walitti qabuu irratti milkaa'eera.' jetti qondaltuun kaawunsilichaa Altiyaa Koolimoor.
''Weels keessaa yaalii sana gara keenya fiduun, namoota darara keessa jiran akkaataa itti gargaarru mijeessaa jirra.''